WOWOW Fahafeno poaka izay mameno mihoatra ny Stove Chrome
Home / Fitaovana an-dakozia / Faucets lakozia ao an-dakozia / WOWOW Faucet mameno vilany ambonin'ilay fatana Chrome
Ny fatin'ny fatana ao an-dakozia dia misy endri-javatra feno fatotra 304 stainless fauxet vatany, mpanamory kalitao avo iray, mora tanterahana ny enta-tanana iray, mora mandà tsy hanapaka zorony, feno feno
2311200C torolàlana fametrahana
Ny vilany Chrome mameno paompy 2311200C
Rehefa mamolavola ny lakozia vaovao misy anao ianao, tsara fa afaka mamolavola azy io hatramin'ny voalohany ianao. Azonao atao ny mieritreritra ny fiasa rehetra tianao sy mila manao ny traikefanao an-dakozia. Ny lakozia dia ho an'ny ankamaroan'ny fianakaviana, ny toerana andanianao ny ankamaroan'ny fotoananao rehefa ao an-trano ianao. Noho izany dia mamolavola ny lakozia nofinofy izay mahatanteraka ny filanao sy ny fanirianao rehetra, anao sy ny fianakavianao. Rehefa mamolavola an-dakozia ianao hatramin'ny voalohany, ny zavatra lehibe dia hoe afaka manao na inona na inona ianao. Zara raha misy fetra. Eny, hendry teti-bola angamba. Ny ankamaroan'ny fotoana dia mamolavola ny ao an-dakozia nofinofinao fotsiny ianao, ary arakaraka ny vidiny sy ny teti-bolanao tena izy dia manomboka manamboatra ireo zavatra natao
dia mifanaraka amin'ny teti-bolanao. Ny fanontaniana dia hoe ahoana no hahafahana manentana ny volanao. Tsy te-hampihena ireo zavatra manan-danja indrindra aminao ianao. Momba ireo fitaovana sy famaranana ny lakozinao dia mety hisy fiovana lehibe eo amin'ny lafiny vidiny. Rehefa mijery ny tsy fitovian'ny safidy hafa izy ireo dia tsy voamarika indraindray. Amin'izay dia afaka mitahiry vola lafo ianao. Amin'ny lafiny iray, tsy tokony hifandefitra amin'ny kalitaon'ny kojakoja ilaina amin'ny lakozia ianao. Avy eo dia mety ho toa lafo vidy ny farany. Tokony ho azo esorina amin'ny fotoana rehetra izany. Ianao fotsiny mila mahita mpamatsy izay afaka manome anao ny tsara indrindra amin'ny vola. WOWOW no mpamatsy!
Fampiasa krôma vilany famenoana paompy
Ny paosy famenoana vilany iray dia fiasa ao amin'ny lakozinao izay mety hanamora ny fiainana an-dakozia. Satria tsy maro ny olona manana an'io fitaovana an-dakozia io, mbola tsy miitatra ny fampiasana azy. Na izany aza, izy io dia manolotra tombontsoa lehibe ao an-dakozia ao aminao ary manala anao hitondra entana mavesatra toy ny vilany feno rano. Miaraka amin'ny potioma krama mifangaro amin'ny WOWOW dia afaka mameno rano ny vilany misy anao mandritra ny fatana. Amin'izany fomba izany dia tsy mila mitondra ireto vilany ireto avy any amin'ny lakozia ao an-dakozia mankany amin'ny fatana handrahoana rano. Indrindra rehefa manana tanana na sandry malemy ianao, na tsy ampy hery, dia mety hanamora ny fiainanao ho mora be ny fiainanao ity vilany famonoana chrome ity.
Miaraka amin'ny paompy famenoana krôma dia afaka mameno vilany rano ianao fa ao amin'ny fatana an-dakozia. Tsy mampaninona raha afo no efa eo, na raha misy lapoaly hafa efa nandrahoana sy nahandro. Raha vita amin'ny metaly avo lenta ilay paosy kromo, dia afaka manohitra ny hafanana izy. Noho izany, ity paompy famenoana krôma ity dia tena miasa ary manampy tsara ho an'ny lakozia.
Ny sandan'ny volom-bilany volafotsy feno rano
Araka ny voalaza etsy ambony, WOWOW dia manolotra anao ny sandany tsara indrindra amin'ny vola azonao amin'ny tsena. Ity kaody fametahana krôma mahavariana ity dia azo antoka fa afaka mifaninana amin'ny marika A-marika satria manolotra kalitao mitovitovy na tsara kokoa aza, ary atolotra kosa amin'ny vidiny mora izy io. Ny vidin'ny potioma A-marika mameno paosy dia mety ho telo heny na lafo kokoa aza. Ny WOWOW dia mampiseho matetika hatrany fa tsy ilaina mihitsy ireo karazana vidiny ireo. Noho izany, ny WOWOW dia manolotra anao ny sandany tsara indrindra amin'ny vola miaraka amin'ity paompy vilany amin'ny chrome ity. Tsy isalasalana mihitsy!
Ny kalitaon'ny kapoakan'i WOWOW sangan'asa fanakaloanana dia tsy voahetsika. Tsy any amin'ny toerana farany satria WOWOW dia mampiasa fitaovana avo lenta toy ny stainless vy ary ny chrome avo lenta. Hitanao avy hatrany ilay kalitao. Miaraka amin'ny lanjan'ny tsy latsaky ny 60 oz no tsapanao fa vita amin'ny metaly mivaingana izy io. Ity kaopy feno lozôkra ity dia mitohy mandritra ny taona maro, ary afaka mahazo tombony amin'ny fanaovan-javatra mitohy ihany koa ianao amin'ny fametrahana ny paompy kromo feno rano ity. Ny paompy famenoana krôma dia vita amin'ny aoperate Neoperl ihany koa. Izany dia manome tsindry, ary fikorianan'ny rano mandeha foana. Ny aoterany dia miantoka ny fahatapahana kely kokoa, ary ny traikefa amin'ny rano maimaim-poana.
Atolory ireo karazan-tsofin'ny fametahana kromo
Ity paompy famonoana krôma ity dia natao tamim-pahendrena mba tsy handraisana toerana ilaina amin'ny famahanana ao an-dakozia. Amin'ny fandefasana io vilany fametahana kromo io dia afaka manangona azy mora ianao manoloana ny rindrina ao ambadiky ny fatana. Ny paompy famenoana krôma dia manana sangan'ora manana lafiny roa. Amin'ity fomba ity dia azo tehirizina minimalistically izy io, ary mbola mahatratra lavitra izany rehefa mamelatra tanteraka. Amin'ny halavany 24 santimetatra avy amin'ny rindrina, azonao atao ny manatratra ny zoron'ny lafaobin'ny lakozia anao.
Miaraka amin'ny tànana roa dia azonao atao ny manodina moramora ny fametahana paompy mora foana nefa tsy mitete mihitsy. Manome fiarovana bebe kokoa ihany koa izany, satria matahotra ny sasany amin'ireny karazana kasety ireny ny olona sasany. Satria tsy misy lalandrana, dia afaka milatsaka eo am-patana ny rano mandeha. Azonao atao ny manakatona ity takelaka fandefasana chrome ity amin'ny valva master, akaikin'ny rindrina. Ary azonao atao ny manakatona azy io sy ny valve amin'ny spout. Fiantohana mikoriana tsy miova izay mahatanteraka ny tanjony. Ity fiarovana roa ity dia manome fiarovana farany. Rehefa te-hampiasa takelaka famenoana kromo ianao dia manokatra ny valifaty master fotsiny ianao, ary ataonao io vilany famonoana krôma io toy ny paompy an-dakozia hafa.
Mametaka paosy kromo feno rano
Noho ny famaranana ny chrome maoderina, ity tsindry fanefan-krôma ity dia manome fanampiny fanampiny amin'ny fomba ao an-dakozia. Ity dia misy valin-kafatra sy manelatelatra coating amin'ny paompy famenoan-tananao. Miaraka amin'ny vatan'ny vy stainless 304, ity tsipika famonoana krôma ity dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fomba lakozia. Ho fanampin'izany, ity kaopy feno loaka ity dia tsy corrosion ary mijanona ho tsara tarehy sy tsara tarehy mandritra ny taona maro. Tsy misy na inona na inona atolotry ny WOWOW anao mandritra ny 5 taona amin'ny vanim-potoanan'ny paompy fanaovana chrome ity. Izany dia manaporofo fa matoky ny vokatra ao ny WOWOW, ary ny sandan'ny vola laninao miaraka aminy. Ny tombony azo avy amin'ny poty chrome dia mameno paompy amin'ny fomba fohy.
• Ny paompy famenoana vilany azo ampiharina
• Ny famolavolana maoderina miaraka amin'ny famaranana chrome avo lenta
• valle roa
• Ny fatrany avo indrindra miaraka amin'ny fitaovam-piadiana roa
SKU: 2311200C Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Faucets lakozia ao an-dakozia Tags: Chrome Vita, Fitaovana savoka an-dakozia, Wall Mount
15.5 X 9.7 X 2.1 santimetatra